Galkaio, Somalia, May 30kii 2004
Jawaab: Qoraalladii Xerta Cabdullahi iyo Cabdiqaasim
»SPR, C/risaaq X Xuseen, iyo Osman maxaa ka dhexeeya? [Ali-Koor]
» Cabdirisaaq xaaji Xuseen iyo Cismaan Axmed sheekh [Shaafici]
» Naqdintii Qormadii Cabdirisaaq Xaaji Xuseen [Calasow]
» Maxaa ka jira in Daaroodku Kornayl C/laahi Yuusuf ku taageerayaan damaciisa madaxweyne ee Soomaaliya? [O.A. Sheekh]
Galkaio City, Somalia, May 30kii 2004 - Somali Peace Rally - Waxaa Somalitalk soo shaacisay qoraal ka yimid nin caaya dadka Cabdullahi naqdiya iyo ciddii uu u maleeyo inay wax isu yihiin. Mr. Cali-Koor wuxuu akhriyey qoraalkii SPR ee ahaa Cadbullaahi iyo Cabdiqaasim wax isma dhaaamaan midnana Somaliya kama saari karo godka ay wax kaga rideen. Intii uu ka jawaabi lahaa qodobbaddii Yey lagu naqdiyey, sida xukun xoog ku haysi ama xoog ku doon, qaraabo meel u dhiibad, tuug khasni ka dhigad, madaxdoon miyar la'aan ah, maamul xumo hooyadeed, xabashi xukun Somali ka raadsi, iyo dhiig daadin xitaa biru-magoyso (salaaddiin), ka nixid wixii wax garanaya iyo in ummaddoo dhan caqli saajin wada yeelato, ama noqoto tuug/jawaajiis diktaator dawarsata. Ilaah baa taas Somali ka hoos gashay..
Intii Cali-Koor uu Cabdullahi ka difaaci lahaa intaas iyo ka badan oo SPR ku eedaysay, wuxuu door biday inuu cay ugu dhaadhaamiyo oday Somaliyeed (dadka badidiisuna ixtiraamaan) oon shaqo ku lahayn si toos ah ama si dadban SPR.
Haddii male awaalka Cali-koor si socdo waxaa dhici karta inuu caayo dad badan ee uusan hadda madaxa ku hayn, waayo SPR waa hay'ad dad badani xubin ka yihiin. Tusaale, Cali-koor oo u soo dira SPR aflagaaddooyinka baa uga dhow SPR Cusman Sheikh oon weligiis la soo xariirin SPR.
Waxaa Cali koor qirtay in sida ceebaha Cabdullahi aan loo soo bandhigin inuu caayo oday Somaliyeed. Waa caqliga dadka maanta raba inay Somaliya hoggaanshaan iyo taageerayashooda. Ninba ceesaantiis ceel keen. Waa tayada taageeryaasha Cabdullaahi.. Horaa loo yiri, diktaator iyo tayi xumo waa ilmo-adeer. Cali, taasi waa kugu khasaaro, waxaad shubtay waa wax adaga iyo odaygaad u gaftay idin ka dhexeeye. SPR in tamari sii gasho mooyee u hakin ma doonto soo bandhiggeeda ceebata siddeetan jirka ku can baxay xabbad la qar-qarka, haddana raba inuu Somaliya ku haysto xukun xabishiyeed, xabbad iyo xoog. Waxayaabaha kale ee raqiiska ah sida dad baa ciil qaba, waan ka sarraynaa inaan kula wadno.
Waxaa darsi ah hadal uu muddo hore qoray ninka la yiraahdo Cabdiwaaxid oo ahaa, milleeshiyada Cabdiqaasim ka fiican tan Cabdullahi, waayo waxay xirtaan Cabdiqaasim markii ay lacag waayeen meesha kuwa Puntland bangiyada iyo waddooyinka qabsadaan. Taas waxaa ka markhaati kacay taageere Cabdiqaasim oo la soo xariiray SPR Waxaa ninkaasi SPR ku eedeeyey inay samaysay gaf weyn waayo labo nin oon la is-barbarhdigi karin bay is-barbardhigtay. Wuxuu ku sii daray, xaq darrada aad Cabdiqaasim ka gasheen waxaa kow ka ah inuusan dad ama salaaddiin xukun ku layn .
Mudane, waxaad muujisay inaad ka sarraysid taageerayaasha Kornaylka, waxaadse ogaataa inaannaan marna ku eedayn Cabdiqaasim dad layn; kama aadan hadal arrimaha aan ku eedaynay oo ay kow ka tahay in qabyaaladu indhaha ka tuurtay odayga, taasina aysan ahayn eed cusub, ee ay ugu yaraan soddon jirtahay arrimaha dhawaan dhacayna ay taas ka markhaati furtay, sida Cabdullahi ceebihiise hore ay ugu markhaati furtay intuu hadda horboodayey Puntland. Waxaan ku adkaysanynaa in Cabdiqaasim ku fashilay hawshii Somali ku qaddarisay, waxaana taas qiran kara qof uun wax qiimo ahi ku hareen, kii kale waa cagta-saartayee ku carraabiyaay, hoos ula faq jufudiisa, "wax yarbaa inoo haray".
.Dacaayadda madaalayaasha ee ku qaraabta 'suldaan Hurre' (Cali-Koor)
. Al-Islaax iyo dhacdooyin dhacay (Cali-koor)
.Waraysi Dheer oo ku Saabsan Dilkii Suldaan Hurre iyo Imaatanka Isimada ee Gaalkacayo Nov 2003
.Sannad-Guuro Dilkii Suldaan Hurre, fartoo Cabdillahi ku fiiqan SPR 2003
.SPR oo Canbaaraynaysa Dilka Hogaan Dhaqmeedka Puntland SPR 2002
.Tacsidii Suldaan Hurre...
.Beenin Maqaal hore..:
.Tanu Ma Caddaalad ba mise waa Siyaasadda aan nadiifka ahayn ee Soomaaliya?